COMMISSARIAT CENTRAL AO TOAMASINA » Police Nationale
« UNITE D’INTERVENTION RAPIDE : OPERATION TENUE CIVILE
Entana miteti-bidy 195 510 000ar tafaverina amin’ny tompony »
COMMISSARIAT CENTRAL AO TOAMASINA
Jiolahy 04 tsy misaron-tava mirongo basy poleta 02 (toa vita gasy raha ny tahirin-tsary azo tamin’ny vidéo survéillance) no nandromba ny ACCES BANQUE tao Bazary Kely androany faha-08 may 2019 tokony ho tamin’ny 10 ora 50 tany ho any.
Niditra an-keriny tao amin’ity toerana ity ireto jiolahy ireto rehefa nandrahona ireo mpiambina teo aloan’ny varavarana fidirana. Noendahan’izy ireo avokoa ireo mpanjifa tao amin’ity banky ity ary norobain’izy ireo ny vola rehetra tao amin’ny caisse. Finday sy vola maro no nalain’izy ireo tamin’ireo mpanjifa tao ary vola mitentina 50 tapitrisa ariary kosa ny an’ny banky.
Nitsoaka tamin’ny moto ireto jiolahy ireto rehefa nahavita ny asa ratsiny ary nariany teny an-dalana ny moto 01 hafa rehefa nahita ny fiavin’ny Polisy izy ireo.
Efa mandeha ny famotorona amin’izao fotoana izao ary nanamarika ny Commissaire Central any an-toerana fa misy itovizany amin’ireo fanafihana grossistes nisesisesy tao Toamasina ny herinandro lasa teo ity nitranga androany ity ary efa misy endrika vitsivitsy fantatra tamin’ny tahirin-tsary nojerena.
Tsy hanaiky mora izao asan-jiolahy mampitebiteby ny fiara-monina ao Toamasina izao ny Polisy fa hanao izay fara-heriny hanamborana azy ireo
Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=12955